लगाम बिनाको छाडा घोडा ः किसानमारा कृषि ज्ञान केन्द्र !(सम्पादकीय… ) | Today Express
लगाम बिनाको छाडा घोडा ः किसानमारा कृषि ज्ञान केन्द्र !(सम्पादकीय… )
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भनेर वर्षेनी यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ । कृषि बजेटले किसानलाई मल, बिउ बिजनमा अनुदानसहित विभिन्न कृषि सामाग्री र औजारहरु उपलब्ध गराउने काम भूमि व्यवस्था, कृति तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको हो । तर कृषि ज्ञान केन्द्रहरु नै भ्रष्टाचार र गैरकिसानहरुको अखडा बन्दै जाँदा वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् । धानको बिउ आउँछ, वास्तविक किसानले पाउँदैनन् । मलखाद आउँछ, वास्तविक किसानले पाउँदैनन् । अन्य विभिन्न कृषि औजारहरु आउँछ, वास्तविक किसानले पाउँदैनन् । वास्तविक किसानलाई त ज्ञान केन्द्रले के–के गर्छ भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन् । किसानले अनुदान पाउँछन् रे भनेको सुनेका उनीहरु खेती किसानीबाट केही समय निकालेर बल्लतल्ल कृषि ज्ञान केन्द्र पुग्दा पनि खाली हातमा निराशाको भारी बोकेर फर्किन बाध्य छन् । ज्ञान केन्द्र र त्यसका कर्मचारीहरु भने कार्यालय पनि नगई घरमै बसेर सबै बजेट र प्राप्त सामाग्रीको बाँडफाँड गरिरहेका हुन्छन् । वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने अनुदान ल्याईते र बनाईते किसानले लिई रहेका हुन्छन् । अनि कर्मचारीले तिनीहरुबाट कमिसन पाईरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई किसानसँग सरोकार भन्दा पनि कमिसनसँग सरोकार हुने गर्दछ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको बजेटको १० प्रतिशत मात्रै पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्थ्यो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा कायापलट भई सकेको हुने थियो । अझ विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत नै वास्तविक किसानसम्म पुग्ने हो भने त धान चामल केही पनि अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । यहीको उत्पादनले पुगेर पनि बढी भएको बरु विदेश पठाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत(भन्दा बढी नै होला कम होइन) मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन् । यहाँ धान, गहूँ, चना, मुसुरो, उखु, सुर्ति लगायतका बालीहरु उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै आलु, प्याज, लसुन, कोभी, टमाटर, करेला, घिरौला लगायतका तरकारी, अदुवा, वेसार, अलैंची, जुनार, सुन्तला, आँप, लिच्ची समेत उत्पादन हुने गरेको छ । तर ती उत्पादनबाट किसानले सोचे जसरी लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । कारण हो, समयमा मलखाद, सिँचाई आदि नपाउनु । फलस्वरुप दाल, चामल, तेल, मसलादेखि लिएर चिनीसम्म बाहिरबाट नै आयात गर्नु परेको छ । त्यसले देशको ठुलो अर्थ देश बाहिर गएको छ । बाहिरबाट आयात गरिएका खाद्यवस्तुका कारण केही मान्छेहरुलाई राम्रै कमिसन समेत मिलीरहेको छ । जस्तो कि चिनी । चिनी विदेशबाट नेपाल आउँदा त्यसमा केही सीमित मान्छेहरुले कमिसन पाउने गरेको कुरा बाहिर आईसकेको हो । नेपालमा उत्पादन गरिएका उखु र त्यसबाट बनेका चिनीले नै यहाँको माग धान्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि बाहिरबाट आयात गरिँदा यहाँका किसानलाई पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नै हो ।
प्रसंग हो सर्लाहीको कृषि ज्ञान केन्द्रले ब्लक निर्माणका लागि आएको ४ करोड अनियमितता गरेको । सर्लाही एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो । यस्तो दुष्कर्म सर्लाही र प्रदेश २ सहित देशैभरका कृषि केन्द्रहरुले गरिरहेका छन् । ब्लक निर्माणमा अनियमितता त एउटा सानो घटना मात्रै हो । अझै ठुला ठुला योजनाहरुमा चलखेल भएको हुन सक्छ, तर कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको नियमन र अनुगमन भने जरुरी छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई वास्तविक किसानको साझा घर बनाउने हो भने सुरुमा ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरुको भ्रष्ट सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ । केन्द्रहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनु जरुरी छ । भागबण्डाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अनि सम्बन्धित निकाय मार्फत् सुक्ष्म अनुगमन हुनु जरुरी छ । हैन भने संघले वर्षेनी बजेट पठाउँछ, ज्ञान केन्द्रले यहाँ फटाफट पचाउँछ । न हुन्छ कृषिमा सुधार, न हुन्छ किसानको उद्धार । हुन्छ त केवल कर्मचारी, तिनका आफन्त र गैरकिसानको जयजयकार ! त्यसर्थ किसानमारा ज्ञान केन्द्रलाई बलियो लगाम लगाउनु जोडदार आवश्यकता छ ।